Mateyu 2 - Holy Bible [Xhosa Bible 1975]
Kuthe ke, akubon ukuba uYesu uzelwe eBhetelehem yelakwaYuda, emihleni kaHerode ukumkani, kwabonakala kufika eYerusalem izazi zivela empumalanga, zisithi,
Kwakuba njalo, uHerode, ezibize ngasese izazi ezo,waqondisisa kakuhle kuzo ixesha lokubonakala kwenkwenkwezi leyo;
Zithe zakubon ukuba zimkile ke zona, naso isithunywa seNkosi sibonakala kuYosefu ephupheni, sisithi, Vuka,umthabathe umntwana nonina, usabele eYiputa, uze ube khona apho ndide ndikuxelele; kuba uHerode uhlalele ukumfuna umntwana lowo, ukuba amtshabalalise.
Kwavakala izwi eRama, Isimema nesililo nesijwili esikhulu,URakeli elilela abantwana bakhe, Engavumi ukuthuthuzeleka,ngokuba bengasekho.
Vuka, umthabathe umntwana nonina, uye ezweni lakwaSirayeli;kuba bafile abo babezonda ubomi bomntwana.
Ke kaloku, akuva ukuba uArkelawo ungukumkani kwelakwaYuda esikhundleni sikaHerode uyise, woyika ukuhamba asinge khona;wathi ke, ehlatyelwe nguThixo ephupheni, wemka waya kumacala elaseGalili.